मुटुको टुक्रा प्यारो घर प्रणाम सहित संझना, कुशल रहि कुशलताको लागि हाम्रा कुल देवता सहित नवदुर्गा भवानीसँग प्राथना गर्दछु ।
बिशेष कुरा कोभिड महामारी तथा कामको ब्यस्तताको कारण घरमा आई तिमीसँग रहन नसकेको कारण तिम्रो माया स्वरूप दुई चार शब्द लेख्न गइरहेको छु ।
प्रिय घर तिम्रो बारे केही लेख्ने कोसिस गर्दै गर्दा अनगिन्ती प्रश्नले सताइरहेका छन् । आफू जन्मेको, हुर्केको घरबाट टाढा रहनु पर्दाको पिडा सायद दुई चार शब्दमा के नै सकिन्थ्यो र ? तैपनि तिम्रो संझनामा छट्पटाइरहेको मनलाई केही शान्त पार्न खोजेको छु ।
प्रिय घर ०३१\_३२ साल तिर बढो मेहनतको साथ तिमीलाई बाबाले निर्माण गरेको कुरा माताजीबाट सुनिरहन्छु । तिमीले हामीहरुलाई हुर्काउन खेलेको भुमिका, तिम्रा दुःख कष्टका ती क्षण सबै जानकारी नै छ । आर्थिक अबस्था कमजोर हुँदा तिमीले धेरै ठूला–ठूला चुनौतीहरुको सामना गरेका छौ । हाम्रो लागि तिमीले गरेको दुःख बारे लेखेर साध्य छैन तर पनि जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई आत्मसात गर्न सक्ने घर तिमी महान छौ प्रिय घर । स्थानीय सामन्त,जाली फटाँहाहरुले दिने चुनौतीलाई सामना गर्दै निरन्तर रुपमा आजसम्म तिमी अगाडि बढि रहयौ, तिमी धन्य छौ ।
प्रिय घर कोही कसैसँग तिमी झुकेनौ,सतिसालको रुपमा सधै खडा रहदै अगाडि बढिरहयौ । चारैतिरबाट तिमीलाई आक्रमणको प्रयास नगरेका होइनन तर तिम्रो अगाडि केही लागेन, यो नै हाम्रो गौरव हो ।
प्रिय घर, अहिले दशै आइसकेको छ । कताबाट आउछ कान्छो भन्दै मलाई हेरेर बसेका हौला । तर, चाहना हुँदाहुदै पनि म आउन सकिन यसको लागि तिमीसँग क्षमाप्रार्थी छु ।
दशै आउदै गर्दा कमेरो लगाउने, रातो माटोले लिप्ने, पुराना ब्याट्री फोरेर कालो लगाउने गर्दा कति खुशी हुने गथ्यौ, त्यो सबै मलाई थाहा छ । प्रिय घर, बिगतको इतिहास मैले कहां भुलेको छु र ?
प्रिय घर, अहिले सबै वातावरण फेरिएको छ ,टाढा छु तिमीले संझिरहेको पनि थाहा छ ,अहिले तिमी झन दुःख कष्टमा छौ ,तिमीलाई माया गर्ने मान्छेहरु थोरैमात्र हुनुहुन्छ । दशैको बेला मलाई आयो कि भनेर हेरिरहने माइला बा, कान्छो आए त सत्र खेल्न हुन्थ्यो भनेर संझने साइला बा, तलतिर मोति कान्छा बा कोही पनि अहिले हुनुहुन्न । वरिपरिका माया गर्ने मान्छेहरु पनि धेरै बसाइँसराइ गरिसक्नु भएको सुनेको छु । प्रिय घर,हामी हुदाँ त तिमीलाई कति दुःख दिन खोज्दथे तर अहिले झन तिमीलाई कति गाह्रो होला ? वरिपरि बगैंचाका फलफूलले बाटो हेरेर बसेका होलान ! कटहर रोइरहेको होला,लौसी,सुन्तला, आँप, आरु, आरुपखरा आदिले चौधरे तिर हाम्रो बाटो हेरेर बसेका होलान्,उनीहरूलाई पनि कति आक्रमण भए होला ?
प्रिय घर, अहिले न लिपपोत छ तिम्रो न अरु संरक्षण नै भएको छ ,कति धेरै रोएका हौला, कति धेरै निराश भएका हौला, कति धेरै एक्लो महसुस गरेका हौला ? मन कति आत्तिएको होला ?? स्यानि चौतारीले झन कति संझेको होला ?
प्रिय घर,तिमीप्रति यति धेरै माया हुँदाहुदै पनि छाडेर हिड्न पर्दाको पिडाले नरमाइलो महसुस गराईरहेको छ । सँगै तिम्रो साथमा तिम्रो मायामा रमाउने ईच्छा हुँदाहुदै विभिन्न कारण, धेरै कारण तिमीले बुझेकै छौ ) तिमीबाट टाढा रहन पर्यो ।
प्रिय घर, दशै आयो भन्छ्न कति रमाएका छन तर तिमी नभएको ठाउँमा मलाई कुनै रमाइलो लागेको छैन, अघिपछि झगडा गरेपनि दशैमा टिका लगाउन गएपछि बोलचाल हुने र फेरि माया सदभावको नयाँ भावना अगाडि बढने क्षण कति आनंन्दमय हुन्थ्यो ।
प्रिय घर ! तिमीलाई पत्र लेख्दा लेख्दै मलाई झन भावुक बनायो । झन भन्दा झन अप्ठ्यारो महसुस गर्दै छु । घरिघरि सपनामा पनि मेरो घर भनि चिच्याईरहेको छु ।
उही तिम्रो मान्छे, रामकृष्ण शर्मा
(पर्वत रुपन्देहि सेवा समाजका अध्यक्ष रहेका शर्मा सक्रिय सामाजिक अभियन्ता हुन । )